UBernard Minier. Uphengululo lothotho lwakhe nguMajor Martin Servaz | Uncwadi lwangoku
UBernard Minier, lelinye lamagama amakhulu kwifayile ye- polar isiFrentshi, ikhuphe inoveli entsha ngosuku lokugqibela 1. Imalunga Ukuzingela (Ukuzingela) kwaye sisiqendu sesithandathu esenza iinkwenkwezi zezona zidalwa zakhe zidumileyo, umphathi UMartin Servaz. Kodwa ... ipapashiwe kumazwe e-Gallic, okwangoku, kwaye apha sele silibekile ixesha elidlulileyo Intili (Intili). Kufanelekile oku uphononongo lothotho yamapolisa akho athandwayo ukuba anike ingqwalaselo kwaye kungekudala afikelele kubafundi bakho abazinikeleyo endizibala kubo
2 Uthotho lukaMartin Servaz
2.1 Ngaphantsi komkhenkce
4 Musa ukucima isibane
UBernard Minier wazalelwa eBéziers ngo-1960. Wayeza kuba ngugqirha kwaye wasebenzela iCustoms Service ngaphambi kokuba azinikele ngokupheleleyo kuncwadi. Ngo-2011 wapapasha Ngaphantsi komkhenkce, eyokuqala yeenoveli ezi-6 ezenza iinkwenkwezi UMartin Servaz, kwaye impumelelo yakhe enkulu yamsa encotsheni ye Thriller Ingqondo yaseFrance, apho kukho ezimbalwa kunababhali ababalaseleyo. Ezi zilandelayo Isangqa, musa ukucima isibane, ubusuku kwaye ezimbini eziseleyo ukuza apha. KUNYEs kuphela okuphumeleleyo amaxesha amabini Imbasa yePolar kwiCognac Festival kunye nomsebenzi wakhe uguqulelwe kumazwe angamashumi amabini kwaye wathengisa ngaphezulu kweekopi ezizigidi ezibini.
Umntu wakhe owaziwayo UMartin Servaz, umphathi we Amapolisa aseTououse. Ithuku lakhe, ukuzimisela kunye nemfesane, kunye ne vula ubu ethe-ethe beemvakalelo Isiqhamo sokubandakanyeka kwakhe emsebenzini, bamguqulele ekubeni enye yezona zilandelwa kakhulu zohlobo.
El iphela ngeenxa zonke i-Servaz bayayigcwalisa intombi kunye izixhobo yamaqabane Ngubani onaye kokuhle nokubi. Kwaye neyakhe nemesis, i-psychopath engenakoyiswa emlandela ngokungapheliyo. Kodwa akaze ashiye ukuzimisela ukoyisa uloyiko kwaye ayenze kakuhle.
Uthotho lwe UMartin Servaz
Isihloko sokuqala sibekwe ngoDisemba 2008 kunye nokubukeka kwentlambo enzulu yePyrenees apho, xa usiya emsebenzini, abasebenzi besityalo esisebenza ngombane bafumana umzimba wehashe elingenantloko. UServaz uphethe i uphando olubonakala ngathi lolona hlobo lumangalisayo lomsebenzi wakhe wonke. Kodwa yonke into ibonisa ukuba esi sisiqalo sephupha elide nelibi apho i-psychopath eyingozi isemva UJulian Hirtmann.
Yaba yinto ukuziqhelanisa nomabonakude apho ku UCharles berling Ubeke ubuso bakhe kuyo, ngokwahlula-hlula izimvo kuluntu, ngakumbi olo lubhaliweyo.
Apha uServaz ujongana ne ukubulala kakubi kwidolophu encinci yekholeji ukusuka kumazantsi-ntshona eFrance, apho ummelwane abiza amapolisa elumkisa ukuba umfana uhleli echibini lexhoba, eligcwele oonodoli abadadayo. Oko selula, obonakala ngathi ngoyena mrhanelwa, ngu okuphela komntwana kaMarianne, uthando olukhulu lukaServaz kwaye engakhange ayibone ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini.
Musa ukucima isibane
Emva kokukhulu ku vuthela ukubandezeleka ekupheleni kwesihloko esingaphambili, uServaz ubenjalo ngaphakathi kwiziko yamapolisa, esokola ukuyigqitha. Kodwa ngenye imini ufumana ngeposi isitshixo kwigumbi ehotele apho igcisa wazibulala kunyaka ongaphambili. Amayelenqe amkhokelela ekubeni aziphande yedwa ngaxeshanye nentatheli kanomathotholo, UChristine Steinmeyer, Kwakhona ufumane ileta yokuzibulala.
Zombini ziya kudibana y baya kuzifumanisa bebandakanyeka kwiimeko ezimaxhaphetshu eziya kuthi zibeke emngciphekweni iimeko zabo ezibuthathaka zengqondo.
El ukubulawa komfazi oselula kwicawa esemantla ENorway thatha iarhente UKirsten nigaard, yamaPolisa ase-Oslo, ukuphanda ngerig oyile kuLwandle lwaseMantla. Apho ufumanisa ukuba omnye wabasebenzi ubalekile eshiya uthotho lweempawu ezalatha Servaz. UNigaard uza kufika eFrance ukuze amjoyine khangela kwaye ubambe oko kubonakala kucacile I-psycho hirtmann, kwakhona emva kwezona zimbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UBernard Minier. Uphengululo lothotho lwakhe nguMajor Martin Servaz